Tourism muAustralia - Zvese zvaunogona kuona nekuita | Absolut Kufamba
Australia inyika iri muOceania iyo inosanganisa iwo mashiripiti emakona ayo muchimiro chemabhichi, uye tsika dzakasiyana dzinofanirwa kuongorora. Saka nzvimbo dzekushanya dzakapamhamha zvakanyanya. Kana tangotsika pasi, tinofanirwa kuenda kuSydney Opera House, iro basa rese rehunyanzvi rakagadzirirwa kuratidzwa. Zvakare muSydney tinowana Harbor Bridge, pamwe nechiteshi chayo, St. Mary's Cathedral nemabhishi ayo.
Kana tikaenda kuMelbourne hatigone kupotsa raibhurari yayo, pamwe neBotanical Garden kana musika weQueen Victoria. Pamusoro pevaviri vataurwa, kune mamwe maguta atisingakwanise kukanganwa parwendo rwedu, seBrisbane, Adelaide, Perth kana iyo Gold Coast, pakati pevamwe.
Ehezve, pamusoro pemaguta nehunyanzvi hwese, hatigone kukanganwa nzvimbo yepaki uye Australia inoshumirwa zvakanaka. Mimwe inozivikanwa ndeNambung National Park kana Purnululu neKarijini. Asi pamwe imwe yeanonyanya kutaurwa nezvayo inogara iri Park yevaapositori gumi nevaviri. Pamusoro pemapopoma eWallaman kana zviwi zvaro neBarrier Reef. Unosarudza kupi kutanga nzira yako?
kubudikidza Luis Martinez inoita 2 mwedzi .
Iko hakuna akawanda seasustralia uye tekinoroji zvigadzirwa seizvo zvakawanikwa mune dzimwe nyika dzepasi. Icho chikonzero chiri nyore:…
Ndeapi makambani makuru eAustralia? Uyu mubvunzo hauwanzoitika kunze kwenzvimbo dzakasarudzika dzehupfumi. On…
kubudikidza Isabel inoita 2 mwedzi .
Kana pazororo rako rinotevera iwe uchida kuenda kuAustralia kana uchida kuenda kunodzidza munyika ino, ...
kubudikidza Luis Martinez inoita 3 mwedzi .
Zvakatipoteredza muAustralia zvakasiyana kwazvo uye zvakapfuma kwazvo. Ramba uchifunga kuti tiri kutaura nezve nyika hombe ...
kubudikidza Daniel inoita 4 mwedzi .
Gore rega rega zviuru zvevashanyi zvinoshanyira Australia kunowana chiwi-kondinendi uye kunakidzwa nemararamiro eAustralia. Uye izvo…
Imbwa Tsvuku, imbwa yemuguta yengano
kubudikidza Daniel inoita 8 mwedzi .
Imbwa Tsvuku yakava imwe yeembwa dzinozivikanwa kwazvo pasi rese nekuda kweiyo bhaisikopo «Red Imbwa, ...
Mhuka dzeAustralia dzakasarudzika
Chimwe chezvikonzero zvinoita kuti Australia ive nyika inonakidza zvakadaro hupfumi hwayo hwepanyama hunoshamisa. Iyo mhuka ...
Vatambi vanozivikanwa veAustralia
kubudikidza Luis Martinez inoita 8 mwedzi .
Vatambi vetenisi veAustralia vane mukurumbira vakaita kuti nyika yavo ive nesimba rakakura mumutambo wetsiva. Pasina…
kubudikidza Alberto Makumbo inoita 2 makore .
Yakazembera miti yekokonati, mvura yebhuruu, uye jecha regoridhe. Mufananidzo wakakwana watinodhirowa mune edu ekufambisa fantasies uye ayo anogona kuve ...
Zvikuru zvakakosha pasi rose
Nyika zhinji dzine chiyeuchidzo icho kana kuti nhaka inomiririra pasi rose. Iyo imwe inotungamira zviuru ku ...
Nzvimbo dzakanakisisa dzekushanyira
kubudikidza Alberto Makumbo inoita 3 makore .
Nekusvika kwegore idzva, zvisarudzo zvinotanga kuyerera, uye kunyangwe zvisiri isu tese tisingade kumira ...
Mahombekombe 8 pasi rinovhenekera husiku
Akanakisa eAustralia Rock Bands